Ikhaya elimnandi lihlaziyiwe, ichibi elishushu, ulwandle olu-5'.
Embindini wekota 'indala' yelali yaseTorregrotta, le ndlu ibanzi, iyasebenza kwaye ikhululekile. Yabuyiselwa ngokupheleleyo ngo-2016, kwaye ine-air conditioning.
Ifumaneka kufutshane neevenkile ezininzi zasekhaya, kwaye nje iikhilomitha ezi-3 ukusuka elwandle, le ndlu iqhelekile yaseSicilian ilala ukuya kuthi ga kwi-6 -8 yabantu kwaye inechibi labucala. Iitawuli ezi-2 ezinkulu kunye nezi-2 eziphakathi zinikezelwe/umntu. Ukufikelela kwi-Intanethi kuyo yonke indlu kunye nakwiindawo zokuhlala.
Le yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela uxolo noxolo, kunye neembono ezimangalisayo phezu kwelali yasentabeni yaseSan Pier Nicetto, kwaye kwangaxeshanye ifikeleleka lula kwiivenkile zasekhaya kunye neevenkile ezinkulu, imivalo, ubugcisa kunye nemisebenzi yezandla, njl njl. yahlaziywa, ngezinto ezintsha, ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhobo.
Indlu ineendawo ezi-3 eziphambili:
Umgangatho osezantsi: Iholo lokungena, igumbi lokulala eli-1 elineTV, igumbi lokuhlambela eli-1 + WC.
Umgangatho wokuqala: Igumbi lokulala eli-1 eline-TV, ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-solarium eluphahleni enegumbi lokuhlambela elihle leTropiki, indawo yokuphumla yeTV enezitulo ezi-2 zokulala.
Ijonge kwiqula lokuqubha, ikhitshi elifakwe itafile enezihlalo ezi-6 (ezinefriji yohlobo lwaseMelika, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba), iWC. I-Terrace ene-awning kunye netafile enkulu ehlala i-12 (60m2).
Indawo ekhuselekileyo yedama lokuqubha equka ithafa eli-1 elilinganisa i-35m2 elinendawo yokuphumla yangaphandle phantsi kwe-awning kunye nedama lokuqubha elinobukhulu obusi-7 x 4.5 m, igumbi lokuhlambela (ishawa), indawo yokugcina, kunye neendawo zokuhlala ezitofotofo ezisi-8.
Kwaye, i-icing kwikhekhe - abamelwane banobungane ngokukodwa kwaye baluncedo! Bangakuvuyela ukukunceda ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki ezincinci zobugcisa. UDonata unokukwenzela izitya zasekhaya ukuba ungathanda ukufumana ukutya kwaseSicilian (intlawulo eyongezelelweyo).
Yonke into yenzelwe intuthuzelo kunye nolonwabo lwakho kwaye uqiniseke ukuba uziva ukhululekile njengoko ubuya kwenza ekhaya, kodwa ngebhonasi yokuba seholide!
Umoya opholileyo othe cwaka, oomatrasi abakhulu abenziwe ligcisa lalapha ekhaya, umqhaphu othambileyo wasehlotyeni needuvethi zasebusika. Ilungele ubusuku obunokuthula kunye nokuphumla okupheleleyo! Ifenitshala yanamhlanje kodwa ngochuku lwendawo.
Idama lokuqubha, elivulwa ngo-Epreli ukuya ku-Okthobha, linesithonga sasehlotyeni ukuqinisekisa ukuba wonwabele ubushushu obumyoli. Yi-1.40m ubunzulu xa iyonke. Kukho indawo yokuphumla ebekwe ngokufanelekileyo ijonge echibini lokuqubha phantsi kwe-awning apho unokuphumla, ufunde, ulale, wonwabele i-aperitif (kwaye netafile eqaqambileyo yeGuzzini engaqhawukiyo iya kufumaneka ukuze ungabinaxinzelelo ukuba abantwana babaleka kufutshane nendawo yokulala. idama!)
Le ndlu ikwilali endikhulele kuyo. Lonke usapho lwam luhlala ekuhlaleni, kwaye luya konwaba ukukuxelela into onokuthi uyibone kwaye uyenze kwilali okanye kufutshane (ngesiTaliyane).
Isikhokelo esisebenzayo esincinci siyafumaneka. Iqulethe iidilesi eziluncedo kunye neengcebiso zokukunceda ucwangcise uhambo oluya kwiilwandle ezintle, iindawo ezintle, okanye iilali ezingenakuphoswa ezintabeni.
Ibar yelali elunxwemeni, iRugantino, iyimfuneko. Ukutya kulungile kwaye amaxabiso afanelekile. Inethafa elihle elijonge elwandle. Apha uya kudibana ikakhulu nabahlali okanye ababuyayo abavela ngaphandle.
Ungafumana iindawo zabakhenkethi ezilungileyo kakhulu njengeMilazzo, iPatti, neCapo d'Orlando, iTindari, iRoccavaldina, iTaormina, okanye iAeolian Islands (isuka eMILAZZO). Abantu balapha banobuhlobo, kwaye ukuphila akubizi mali ininzi!
Isithili apho indlu ikhoyo zidwelisiwe. Inezindlu zamandulo, indledlana eqhelekileyo apho abantu abadala bahlala ngasecangweni labo kwaye baxhoma iwashing yabo kwiibhalkhoni zabo. Ngokungafaniyo neminye imimandla, kusekho amagcisa amaninzi alapha ekhaya, kwaye baya kuhamba umgama owongezelelweyo ukukunceda kwaye bakunike into oyifunayo. Ngoko ukuphuma ukuya kwiivenkile zasekuhlaleni kunokuba mnandi! Ukuba uyathanda, uya kufumana iivenkile ezinkulu kwaye malunga nalo lonke uhlobo lwevenkile onokucinga malunga ne-1 km kude!
Yaye, ukongezelela, abantu banomoya wokubuk’ iindwendwe yaye bayabathanda abakhenkethi.